PSJTV | 'उखानमा पनि मिसन र भिजन छ'
समय पत्रकारितामा जमेका गोकुल बाँस्कोटा यतिवेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री छन् । अन्य मन्त्री पुल्चोकस्थित सरकारी क्वार्टर सरे, तर राज्यमन्त्री भएलगत्तै बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीको भक्तपुर बालकोटस्थित निजी निवासमा डेरा सरे । यही कारण ओली र बाँस्कोटाको सम्बन्ध निकट भएको चर्चा सुरु भयो । तर, बाँस्कोटाले विद्यार्थीजीवनदेखि नै ओलीसँग नजिक थिए ।
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा बाँस्कोटा रेडियो नेपालको ‘घटना विचार’ कार्यक्रममा संलग्न भए । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–त्यही वेलादेखि उनको सम्बन्ध ओलीसँग नजिक भयो । राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नजरमा केपी शर्मा ओली कस्ता छन् ? उनकै शब्दमाः
जतिवेला हामी क्याम्पसका विद्यार्थी थियौँ, त्यसवेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनालीलगायत नेताहरू जेलमा आस्थाको बन्दी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेलादेखि नै उहाँसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसियो । हामीले उहाँसहित आस्थाका बन्दी रिहा गर्न माग गर्दै काठमाडौंका भित्ता रंग्यायौँ । हामी अनेरास्ववियुमा संगठित भयौँ । त्यसपछि केपी ओलीको व्यक्तित्व बुझ्न थालियो ।
घटना विचारमा हुँदा भेट
मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या हुँदा हामी बुझ्ने भइसकेका थियौँ । नेपालको वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पु(याउने जननेताको निधनपछि जनताको बहुदलीय जनवादको बुझाइ र नेतृत्वमा देशव्यापी अन्योल छायो । लगत्तै अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले भद्रकालीको कृषि आयोजना केन्द्र ९एप्रोक्स०मा कार्यक्रम राख्यो । केपी ओली प्रमुख वक्ता रहेको त्यस कार्यक्रममा म संगठनको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सहभागी थिएँ । निरन्तर दुई घन्टाको उहाँको सम्बोधनले म प्रभावित भएँ । ओलीले मदनको विरासत जोगाउने भरोसासँगै आत्मविश्वास पैदा भयो ।
०५१ सालमै उहाँलाई दोस्रोपटक देखेँ । नजिक पुगेर हात मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो । तर, मौका जुरेन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेपछि संयोगवश म रेडियो नेपालको घटना र विचार कार्यक्रममा संलग्न भएँ । त्यसपछि भेटघाट भयो ।
दृढ इच्छाशक्ति र दूरदर्शी
प्रधानमन्त्री ओलीमा वाम–लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवाद मिश्रित दृढ इच्छाशक्ति छ । उहाँ कहिलेकाहीँ पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ । कतिपय नेता पार्टी, परिवार र सीमित नेताहरूको चंगुलमा पस्छन्, उहाँको दायरा त्योभन्दा फराकिलो छ । आयामिक नेताका रूपमा प्रकट हुने उहाँको इच्छाशक्ति र साहसलाई कतिपयले दुस्साहसका रूपमा लिन्छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक विकासलाई मुद्दा बनाएर समाज र राज्यमा स्थापित गर्ने नेता उहाँ नै हो । केपी ओली त्यो पात्र हो, जसले नाकाबन्दीका कारण कसरी छाक टारौँ भन्दै मान्छेहरू रन्थनिरहेका वेला रेल कुदाउने, समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज तैराउने कुरा गरेर आशावादको सञ्चार गरायो । लोडसेडिङ चर्किएका वेला हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नुभयो ।
व्यंग्य गर्नेहरूले उहाँमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरे । तर, प्रतिकूलतामा नआत्तिने र अनुकूलतामा पनि आफ्नै तरिकाले अघि बढ्ने शैली, स्वभाव र इच्छाशक्ति उहाँमा छ । धेरै नेता ठ्याक्कै अगाडि मात्र देख्छन्, तर उहाँ क्षितिजसम्म देख्न सक्ने नेता होजस्तो लाग्छ ।
छिमेक सम्बन्धमा आइसब्रेक
अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्धलाई १० बुँदे सम्झौतामार्फत ऐतिहासिक सम्झौताका रूपमा ‘आइसब्रेक’ गर्नुभयो । त्यो सम्झौता माइलस्टोन थियो । चीनसँगको पारबाहन सम्झौतापछि समाजको धेरै ठूलो पंक्तिले उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्छन् । उहाँसँग मेरो सम्बन्ध वक्र होइन, सरल रेखाको छ ।
अहिले म उहाँकै नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री छु । संयोगले मेरो क्वार्टर उहाँकै निवास बन्न पुग्यो । उहाँले मलाई माया गर्ने कुरा साँचो हो । यसको अर्थ गाली गर्नुहुन्न भन्नेचाहिँ होइन । माया गर्नेले गाली पनि गर्छ । उहाँ मैले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।
सुत्न नसकेपछि बालकोट सरेँ
म संयोगले उहाँको निवासमा आइपुगेको हुँ । भूकम्पले मन्त्री क्वार्टरका कतिपय निवास थिलथिलो बनेका छन् । मेरो बुझाइ थियो– मन्त्री निवासमा १९ वटा भवन छन्, प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्ने होइन । मलाई लाग्यो अरू (राज्यमन्त्री)ले पक्कै पनि सरकारी निवास प्रयोग गर्नुभएको छैन । म पदबहालीलगत्तै मन्त्रालय पुगेँ ।
तर, अरू मन्त्रीहरू तालाचाबी लिएर मन्त्रीको सरकारी निवासतिर कुद्नुभयो । मैले सरकारी निवास पाइनँ । मन्त्री बनिसकेपछि मेरो एकतले सानो घरमा बस्न सक्ने स्थिति भएन । तीनकोठे घरमा एउटा कोठा, एउटा बेडरुम र एउटा किचेन छ । भेटघाटका लागि आउनेलाई कसरी राख्ने ? चमेराको घरमा पाहुना लागेजस्तो हुने भो । घर खोज्दै थिएँ, मन्त्रीलाई घर कसले दिने ?
मान्छे आएको आयै, भेटेको भेट्यै, फोहोर हुन्छ । धेरै खोजेँ, तर उपयुक्त निवास फेला परेन । सत्य भन्दा, मन्त्री बनेपछि घरमा ७ दिनजति त सुत्न सकिनँ । एउटा बाथरुम, १० जना मान्छे पाहुना छन् । एउटाले घन्द्रांङ पार्छ, अर्कोले पनि त्यस्तै गर्छ, मन्त्री भएको हो कि, यातना पाएको १
यही कुरा जस्ताको त्यस्तै उहाँ ९प्रधानमन्त्री०लाई दर्शाएँ । उहाँले भन्नुभो, ‘सारै गाह्रो परेको भए अहिलेलाई बालकोटमा बस्दै गर्नू ।’ यो मप्रति उहाँको विश्वास र माया दुवै हो भन्ने ठानेको छु ।
क्षितिज देख्ने नेता
अरू तीन फिट अगाडि देख्छन्, उहाँ हजारौँ माइल पर हेर्नुहुन्छ । अरू गहिराइमा बसेर सोच्छन्, उहाँ उचाइमा बसेर सोच्नुहुन्छ । अरू अँध्यारो मात्र देख्छन्, तर उहाँ उज्यालो देखाउँदै आशाको सञ्चार गराउनुहुन्छ । पार्टीभित्रै पनि कतिपय नेता पानी–पानी भएर गलिसके । तर, उहाँमा कहिल्यै कुनै विचलन, आत्मसमर्पण देखापरेन । उहाँमा त्यो क्षमता र इच्छाशक्ति पहिल्यैदेखि थियो ।
एउटा उखान छ– शक्तिमा हुँदा बलेको आगो त जसले पनि ताप्छ, तर जब कोही कमजोर हुन्छ, मरेको बाख्रोलाई उपियाँले छाडेजस्तै छाड्छ । संकटको साथी नै खास मित्र हुन्छ । सजिलोमा त सबै मित्र हुन्छन् । उहाँमा कहिल्यै त्यस्तो देखिएन । उहाँलाई जहिले पनि क्षमतावान् नेताका रूपमा पाएँ । यसको अर्थ पार्टीका अन्य नेतालाई अनादर गर्न खोजेको होइन ।
पार्टीभित्र उहाँले धेरैलाई सहयोग गर्दै आउनुभो । त्यसकारण अरूले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उहाँले कुनै नेताको भाग खोस्नुभएन, सबैलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँलाई पनि कसैले सहयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ थियो । मैले कहिल्यै उहाँको साथ छाडिनँ ।
मदन कमरेडको निधनपछि पार्टी विभाजनसम्म भयो । त्यसवेला उहाँ माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो । अरूले उहाँलाई अनुचित माग राखेको भने होलान् । तर, मलाईचाहिँ जायज हो भन्ने लाग्छ । मैले उहाँको चाकडी या प्राप्तिका आधारमा सहयोग गरेको होइन । मेरो मूल्यांकन भयो होला, कतिपयलाई अलिअलि अन्याय भएजस्तो पनि भयो कि रु तर, मूल्यांकन सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ ।
उखानमा मिसन र भिजन
उखान टुक्काले समाजको अनुभव, अभ्यास र भोगाइको प्रतिनिधित्व गर्छ । केपी ओलीका टुक्काले मानक पैदा गर्छ । उहाँका उखान टुक्का दर्शन, जीवनपद्धति, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्रमा आधारित हुन्छन् । उखान टुक्काले सम्प्रेषित गर्न खोजेको सन्देशलाई गहिराइमा हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ ।
नबुझ्नेहरूले हलुका ढंगले केपी कमरेडलाई ‘उखानटुक्के’ भन्लान्, तर उहाँले मिसन, भिजन र डेडिकेसनभित्र उखान–टुक्काको प्रयोग गर्नुहुन्छ । अझ त्यसभित्र योजनासमेत हुन्छ । उहाँले दिने विम्बमा सम्मोहनकला पनि मिसिएको हुन्छ । उहाँको एउटा उखानटुक्का मलाई याद छ । ०६४ को संविधानसभामा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्यो । पार्टीभित्र वामपन्थीले सबैतिर जितेको छ भन्ने मत पनि आयो । त्यसपछि उहाँले भन्नुभो– ‘काकाको खेतमा धान फलेर के गर्नु ? आफ्नो खेत बाँझै छ ।
साथीहरू दंग परेका छन्, तर खान मिल्दैन ।’ त्यसको के अर्थ थियो त ? एमाले पार्टीको नेताका हिसाबले हेर्दा माओवादीसमेत जोडेर ६२ प्रतिशत सिट पुग्यो भन्ने कुरा सुन्दर र प्रिय नै थियो । तर, एमाले अलग वैचारिक र राजनीतिक, दार्शनिक धारमा उभिइरहँदा आफ्नो पल्लाभित्र अर्काको संख्या जोडेर गरिने विश्लेषण कति तथ्यगत र तर्कसंगत थियो त ?
कांग्रेस, माओवादी, विदेशी होऊन् वा पार्टीभित्रका अरू कसैलाई होस्, उखान टुक्कासहित आलोचना गर्ने उहाँको विशेषता नै हो । उहाँको विम्बसहितको टुक्कालाई कसैले बुझ्छन्, कसैले बुझ्दैनन् ।
टेस्टपछि १० ठाउँ क्रसचेक
नेता ओली जसलाई पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ । कुनै कुरा भन्दैमा कहिल्यै फकिनुहुन्न । सुन्नुहुन्छ, मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ । त्यस कुराको १० ठाउँबाट ‘क्रसचेक’ गर्नुहुन्छ । अनि विश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँ कुनै पनि कुरा फ्याट्ट भनिहाल्नुहुन्न । जे कुरा फ्याट्ट भन्नुहुन्छ, त्यसभित्र भविष्य नियालिएको हुन्छ । उहाँ भगवान् होइन, आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर, कि कुरै नबुझेर उहाँको आलोचना हुन्छ, कि आफूलाई असर प(यो भनेर हुन्छ । कुनै कुरा गल्ती लाग्यो भने हामी पनि उहाँलाई औँला ठड्याउँछौँ ।
बोल्दै नबोली उठेर हिँड्ने बानी
एक जमानामा उहाँ विचार, दर्शन, सिद्धान्तकै कुरा बढी गर्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँ संगठक पनि हुनुहुन्थ्यो । संगठक भएकै कारण उहाँ साढे दुई दशकअघि युवासंघको जल्दोबल्दो संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो । संगठक भएकैले झापा आन्दोलन गर्नुभयो । संगठकको मापन कति टायर बाल्यो, कति रिबन काट्योसँग मात्र हुँदैन । संगठन गर्ने कला हुन्छ ।
चेतनासहितको, योजनासहितको अपिलिङ पावर अर्थात् लोभलाग्दो कला उहाँसँग छ । कहीँ हिँडे पनि नहिँडे पनि घर बसीबसी उत्तर र दक्षिणतिर फर्किएका एमाले–माओवादीबीच एकताको सहमति, संयुक्त घोषणापत्र, वाम तालमेल अनि यति ठूलो निर्वाचन परिणाम १ के यो संगठन गर्ने कला होइन रु कसैले आलोचना गर्दा उहाँलाई मन परेन भने सुन्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ अनि उठेर हिँड्नुहुन्छ ।
अडिने बानीले नाफा–घाटा
आफूलाई चित्त नबुझेसम्म हिँड्दै नहिँड्ने, अडिइरहने उहाँको स्वभाव छ । अरू कम्प्रमाइज गर्छन्, उहाँ गर्नुहुन्न । उहाँ आफैँलाई त्यो सही लाग्नुपर्छ, अरूलाई लाग्दैमा हुँदै हुन्न । त्यसले कहिलेकाहीँ घाटा पनि, नाफा पनि भएको छ ।
बालकोट बस्दा संकट थपियो, आलोचना सुनाइदिन्छु अरूले राम्रा–राम्रा कुरा मात्रै उहाँलाई सुनाउँछन् होला, तर मचाहिँ नराम्रो पनि सुनाइदिन्छु । म यहीँ ९बालकोट० बसेको हुनाले एउटा संकट थपिएको छ । बालुवाटारमा उहाँलाई भेट्न नपाउने साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, आलोचना गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, आशा पनि राख्नुहुन्छ । ती सबै कुरा भेट भएका वेला म उहाँलाई सुनाइदिन्छु ।
कसैले सुधार्न नसकेका आनी–बानी
प्रधानमन्त्री ओलीको अस्तव्यस्त दैनिकी कसैले भन्दा पनि सुध्रिएको छैन । उहाँको स्वास्थ्य संवेदनशीलता बुझ्नेहरूले कमसे कम ११ बजे सुतेर ५ बजे उठे हुन्थ्यो भन्ने सुझाब दिन्छन् । धेरै नेता–कार्यकर्ता, अन्य पार्टीका व्यक्ति, साधारण अथवा उद्योगीलगायतले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न सुझाब दिन्छन् । तर, उहाँ त्यो कुरा मान्दै मान्नुहुन्न । औषधि खान, खाना खान पनि अर्कैले कर गर्नुपर्ने उहाँका कहिल्यै नसुध्रिएका बानी हुन् । उहाँको सक्रियता अचम्मको छ ।
झगडापछि भेटघाट बन्द
उहाँ अभिभावकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँले हामीलाई होइन, हामीले उहाँलाई धम्क्याउने, घुक्र्याउने निहुँ खोज्ने हो । कहिलेकाहीँ उहाँलाई पनि निहुँ खोज्न मन लाग्छ होला । तर, पनि अन्ततोगत्वा उहाँसँग मेरो सुखद सम्बन्ध छ । कतिपय वेला उहाँसँग मेरो झगडा पनि परेको छ ।
तर, कहिल्यै पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न । झगडा परेका वेला पनि अरू हातै नमिलाई हिँड्छन्, सिध्याउँछु भन्छन् । तर, उहाँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ । भेट्दाखेरि कुनै दिन झगडा भएको थियो र १ जस्तो पार्नुहुन्छ । सम्बन्ध बिग्रिएका वेला उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ– कता हराइएको थियो रु ५–६ महिनासम्म हामीले एकले अर्कालाई नभेटेको स्थिति पनि छ । पूर्वाग्रह नसाँध्ने भएकाले सम्बन्ध जस्ताको तस्तै भइहाल्छ ।
कुनै पदको मोह छैन
ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भइसक्नुभयो । अब उहाँसँग राष्ट्रको आत्मसम्मान र गौरव, नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मान, मुलुकले आर्थिक रूपले फड्को मार्नुपर्ने सपना, योजना वा कार्यान्वयनका पाटाबाहेक कुनै पद प्राप्त गर्छु भन्ने मोह छैन ।
अब राष्ट्रपति बन्ने कि के गर्ने भन्नेतिर उहाँको मानसिकता तयार हुन्छजस्तो लाग्दैन । दोहो(याएर कक्षा पढ्दिनँ भन्दै आउनुभएको छ । उहाँकै अगुवाइमा पार्टी एकता सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि उहाँले देश निर्माणको मजबुत जग हाल्ने कामको नेतृत्व अवश्य गर्नुहुनेछ । मजबुत जगको महत्वपूर्ण औजार नै पार्टी एकता हो । विचार, सिद्धान्त, दर्शन, कार्यशैलीजस्ता विभिन्न कालखण्डका घटनाक्रमलाई हेर्ने कुरामा कम्प्रमाइज गर्ने, गर्नै नमिल्ने विषय छन् । मूल उद्देश्य पार्टी एकता भएकाले कुनै पनि मूल्यमा यसलाई सम्पन्न गरेपछि उहाँको जीवनमा प्राप्त हुन बाँकी भन्ने नै केही हुँदैन । उहाँ पदमा अलमलिनुहुन्छजस्तो लाग्दैन ।
भारतमा मजदुरी गर्ने करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले अवस्था संकटपूर्ण भएको भन्दै स्वदेश फर्कन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास गुहारेका छन्। तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई घर फर्काउनेभन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको खबर ...